Olee otú jikọọ gị Android ekwentị na MirrorGo
Olee otú igwu egwu Android Mobile Games on PC
Olee otú-aza ozi nke na-elekọta mmadụ software na SMS ngwa ngwa na PC
Otú nyefee data si PC ekwentị mkpanaaka
1. Olee jikọọ gị Android ekwentị na MirrorGo
Maka iji functionalities nke MirrorGo software, i kwesịrị jikọọ gị android smart ekwentị gị na kọmputa. Ozugbo ị ibudatara na arụnyere na MirrorGo software na PC gị na, e nwere abụọ ụzọ jikọọ ekwentị mkpanaaka gị.
Iji eriri USB jikọọ ekwentị mkpanaaka gị ka PC. N'ihi USB njikọ, mkpa ka ị nwee USB Debugging na gị android smart ekwentị.
Ozugbo USB Debugging bụ on, ego maka MTP ọrụ na ekwentị gị. Njikọ dị n'etiti gị smart ekwentị na PC ga-abụ ugbu a na Wondershare MirrorGo ga-akpaghị aka ịchọpụta gị android smart ekwentị.
The Wi-Fi njikọ bụkwa dị na MirrorGo, ị dị nnọọ mkpa enweta na "iṅomi" bọtịnụ na nri n'elu akuku nke MirroGo ngwa, mgbe ahụ, iṅomi QR-koodu ka njikọ n'etiti ekwentị gị na kọmputa.
2. Olee otú igwu egwu Android Mobile Games on PC
Step1: Mgbe ị jikọọ ekwentị mkpanaaka gị ka MirrorGo, na ekwentị mkpanaaka interface ga gbapụta na PC. MirrorGo ga-enwe mmekọrịta n'etiti ihe aga-eme rụrụ na gị na PC na smart ekwentị. N'ihi na-egwu egwuregwu ahụ na gị na PC, ihe ị chọrọ ime bụ pịa akara ngosi nke egwuregwu ị chọrọ igwu.
Nzọụkwụ 2: Iji jiri keyboard nke PC gị kpọmkwem iji rụọ Android mobile egwuregwu.
1) The ọrụ e nyere ndị kacha Ịgba Cha Cha ahụmahụ na nnukwu ákwà.
2) Keyboard akwado egwuregwu shortcut igodo, eg iji akụ igodo na Cops na-apụnara mmadụ egwuregwu.
3) gị egwuregwu data ga nọgidere na-enwe na gị Android ekwentị na-enweghị ihe ize ndụ nke nhicha .
3. Olee-aza ndị ozi nke na-elekọta software na SMS ngwa ngwa na PC
Step1: Ozugbo i ejikọrọ gị android smart ekwentị na PC, na interface ga-abụ dị si ebe ị nwere ike na-elekọta mmadụ ngwa.
Nzọụkwụ 2: Iji jiri keyboard nke PC gị dee na zipu ozi ngwa ngwa.
Advantage: Site n'enyemaka nke MirrorGo, ị nwere ike mfe ịjụ a oku ma zaghachi ngwa ngwa mgbe anata a oku.
4. Olee agafeta data site na PC na-Mobile ekwentị
Step1: Ka idoro na dobe faịlụ na PC na-MirrorGo Mobile Phone Interface.
Step2: Iji ego faịlụ transfer ọganihu site na ịpị Nyefee bọtịnụ.
Step3: Ozugbo nyefe zuru ezu, ndị a faịlụ ga-azọpụta n'okpuru MirrorGo nchekwa.
Advantage: Kwado nyefe nke APK faịlụ nke na-arụnyere-akpaghị aka.
5. Ntọala ozi ngosi
Ozugbo i jikọọ ekwentị mkpanaaka gị ka MirrorGo, ọ bụla ozi site na gị Android smart ekwentị ga-gbapụta na PC.
Mwube nke ukpan: Pịa Setting button dị na n'elu nke ngosi ozi mgbe ngosi Pop elu. Site ntọala menu, gbanyụọ ngosi ozi mmapụta.
Kagbuo ukpan: Pịa bọtịnụ mwube ma họrọ App SMS ngosi Blacklist. Pịa Kagbuo bọtịnụ.
Kagbuo niile nke ngosi: Pịa ntọala bọtịnụ na họrọ Nso malite SMS ngosi ncheta.
6. Atụmatụ & Aghụghọ
1). MirrorGo Top button: Pịa n'elu nri button icon, MirrorGo ga-etinye na elu nke niile meziri oge niile.
2). Ike na-azọpụta Mode: gị na ekwentị mkpanaaka ga-anọ na ike ịzọpụta mode mgbe ị na-eji MirrorGo, nke na-enyere iji belata kpo oku nke.
3). Ihuenyo enweghị mkpọchi: Ọ bụrụ na ị na-Ịnọ nkịtị gwụrụ na akpọchi ihuenyo oge ọ bụla tupu mmeghe MirrorGo, i nwere ike ego a nhọrọ nke bụ ihe adaba.
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ kọntaktị, ozi ederede, photos, WhatsApp ozi, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ na ndị ọzọ. Mụtakwuo